एउटा कारभित्र मृत फेला परेका ३ बालको शव १३ दिनपछि अभिभावकले बुझे « Farakkon
तुलसीपुर, जेठ १ । पार्किङ गरि राखेको भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा कार भित्र मृत अवस्थामा फेला परेका तुलसीपुरका तीन बालकको शव १३ दिन पछि शुक्रबार अभिभावकले बुझेका छन् ।
यसअघि प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्न बाँकेबाट तालिम प्राप्त कुकुर र प्राविधिक झिकाएको थियो भने शवको पोष्टमार्टमका लागि बुटवलबाट बिषेशज्ञ डाक्टर झिकाएको थियो।
पोष्टमार्टमा रिपोर्टले बालकको शरिरमा कुनै चोट÷ पटक नलागेको भन्ने कुरा उल्लेख रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
‘ पोष्ट मार्टम रिपोर्टमा कर्तब्य गरि हत्या भएको देखिदैन,’ डिएसपी सिंहले भनेका थिए ।
शब सडेको अवस्था रहेको हुँदा तीन बालकको मृत्युको कारण अरु के हुन सक्छ ? भनेर अनुसन्धान गर्नका लागि भिसेरा परीक्षण गर्न यसअघि नै काठमाडौं पठाइ सकिएको डिएसपी सिंहले जानकारी दिएका छन् । भिसेरा परीक्षणको रिपोर्ट यही हप्ता भित्र आइपुग्ने सिंहले आशा ब्यक्त गरे ।
त्यस्तै घटनाको दोस्रो दिन बैशाख १९ गते नै कारधनी तुलसीपुर ६ स्याउली बजार बस्ने ३३ वर्षीय यादवप्रसाद गैरे र सोही वडा बस्ने ५७ वर्षीय चालक पदमबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरि ज्यान मुद्दा चलाएर अनुसन्धान जारी रहेको डिएसपी सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
यस अघि पिडित पक्षले तीन बालकको सामुहिक हत्या भएको दावी गदै दोषी पत्ता नलाग्दा सम्म शव नबुझने अडान लिएका थिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ स्याउली बजारमा पार्किङ गरि राखेको भारतीय नम्बर प्लेट आरजे ०१ सिसी ०८८५ नम्बरको कारभित्र बैशाख १८ गते बेलुका तीन बालक मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
तुलसीपुर ६ बरूवाका भीमबहादुर परियारका छोरा ९ वर्षीय सन्दीप परियार, सन्तोष परियारका छोरा ७ वर्षीय सुवास भनिने सूवर्ण परियार र किरण परियारका छोरा ६ वर्षीय करण परियार रहेका थिए ।